Garbociise DDS: “Dhimashada ciidamada Liyuu Booliska Soomaalidu waxa ay kor u dhaaftay 133 dhaawacuna wuu tiro beelay” – Radio Daljir
Garbociise DDS: “Dhimashada ciidamada Liyuu Booliska Soomaalidu waxa ay kor u dhaaftay 133 dhaawacuna wuu tiro beelay”
Oktoobar 15, 2019 2:13 g 1
Ciidanka Liyuu Booliska Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) iyo ciidanka kililka CANFARTA ayaa maanta illaa iyo shalay waxa uu dagaal aad u kharaar oo khasaare ba’an geystay ka socdaa xudduudka labada deegaan ama KILIL.
Dagaalka ayaa biloowday laba maalmood kahor kaddib markii ciidanka Kililka Canfartu ay ku soo duuleen magaalada Garbociise ee gobolka Sitti, kuna laayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan. Dagaalka ay markii danbe ku sii fidey deegaamada Cadayti, Dhundhufo iyo Leensi.
Dagaalka oo shalay sii xoogeystay ayaa maamulka DDS waxa ay direen ciidamo ka tirsan Liyuu Booliska Soomaalida, ciidaankaas oo aan aheyn kuwo u diyaarsan dagaalka ay Canfartu abaabuleen, oo haddana aan haysan saanad dagaal oo ku filan, ayaa waxaa dagaal adagi uu ku qabsaday deegaanka Garbociise.
Illaa iyo hadda warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya khasaaraha gaaray Liyuu Booliska DDS, laakiin Radio Daljir oo warar hoose ka helaya saraakiil dhaawac ah iyo ehelada kuwo kale oo dagaalkii shalay iyo maanta ku dhintay ayaa nala qabysaday oo noo sheegay, “dhimashada ciidamada Liyuu Booliska Soomaalidu waxa ay kor u dhaaftay 133, dhaawacuna wuu tiro beelay.”
Sida ay nala qaybsadeen ilo xogogaal ah oo ka agdhow aagga dagaalka illaa iyo hadda dagaalku waa uu socdaa. Daljir kala soco wararkii ugu danbeeyey iyo waliba wareysiyo ehelada saraakiisha iyo ciidamada ku dhintay dagaalka aagga Garbociise.
Radio Daljir DDS
Dowlad Deegaanka Soomaalida 203 Wararka 19744
RW Xasan Cali Khayre oo kormeeray Xarumo Cafimaad (Sawiro)
Xisbiyadda Siyaasada dalka oo Muqdisho Kulan ku yeeshay kana hadlay Faragalinta kenya (Daawo)
Mumin 7 months ago
Ilahay ha naclado wixi umada islamka hadba shirqool u maleegaya.